एमालेको निर्णय लत्याउदैँ अन्ततः अघि बढे माधव नेपाल, मन्त्रीका लागि आफ्नो पक्षका ७ जनाको नाम पठाए बालुवाटार ! (हेर्नुस् नामसहित) – GALAXY
एमालेको निर्णय लत्याउदैँ अन्ततः अघि बढे माधव नेपाल, मन्त्रीका लागि आफ्नो पक्षका ७ जनाको नाम पठाए बालुवाटार ! (हेर्नुस् नामसहित)
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूह अहिले सर्वाधिक चर्चामा छन् । नेता नेपालकै कारण पटकपटक एमाले एकता भाडिदैँ आएको छ ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । तर सो निर्णय लत्याउदैँ नेता नेपाल अघि बढेका छन् ।